Voadika ny 24 Desambra 2017 1:59 GMT
Kurdo avy amin'ny Kurdo's World miresaka ny fahatokisana an'ireo tranonkalam-baovao Kiorda sasany.
Mitatitra i Kardox fa mampiofana ny Kiorda ao Iraka ny tafika manokana Israeliana teo aloha .
Iadian-kevitra ao amin'ny Kurdistan Bloggers Union ny tatitra momba ny fitroarana tao Duhok, Kiorda Atsimo / Avaratr'i Iraka.
Manana lahatsoratra mahaliana momba ny tetikasa ara-javakantom-bahoaka antsoina hoe Children Cheering Carpet ny ao amin'ny Bleak Blogorrhea, tetikasa ahitana singa Kiorda antsoiny hoe Zaridaina Kiorda Virtoaly.
Roj Bash kosa manana fomba fijery mahaliana momba ireo hajia vaovao avy ao Kiordistana Irakiana, ao anatin'izany ny vaovao manokana momba ireo karazana akanjo ao amin'ny hajia sy ny hoe ahoana no ahafahanao milaza ny faritra misy azy. Misy ihany koa ny lahatsoratra momba ny valan-dresaka vao haingana momba ny Fanontaniana Kiorda ao Syria, tsy dia nahitàna resaka firy momba ny Kiorda. Ary ankalazain'ny vondrona ny tsingerintaona voalohan'ny google bomb azon-dry zareo.
Save Roj TV, bilaogy somary vao haingana, manana fitakiana azonao soniavinao ho fanohanana ny fahitalavitra Kiorda ao Danemark. Rahonana hakatona noho ny votoatiny Kiorda izy amin'izao fotoana izao.
Vatosoa iray avy amin'ireo lahatsoratra mamiratra maro avy amin'i Vladimir ao amin'ny From Holland to Kurdistan ny momba ny Andininy faha-301 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Tiorka izay matetika ampiasain'ny Repoblikan'i Torkia mba hamerana ny fahalalahana miteny ao anatin'ny sisintaniny.
Ny farany (fa tsy ny kely indrindra) dia i Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes izay namoaka vaovao be dia be momba ny fifidianana ho avy amin'ny 15 Desambra ao Iraka. Satria hotontosaina amin'ny herinandro ambony ny fifidianana, mikasa ny hanome anao, mpamaky malalako, fomba fijery lalina momba ny fifidianana ho avy avy amin'ny fomba fijery Kiorda aho. Mandra-pahatongan'izany, manetry tena ho anao foana aho.